Shirkii Mashruuca QEF, UK oo si wanaagsan u dhacay iyo shahaado sharaf la guddoonsiiyey – Rasaasa News
Sep 28, 2009 Korahe Education Forum
Shirweynihii Mashruuca Waxbarashada Qoraxey faraca UK, ayaa maalintii Axadda ee taariikhdu ahayd Sept 27, 2009 ka dhacay magaalada London. Shirka oo ay ka soo qayb galeen taageerayaasha Mashruuca oo ka kala yimid gabolada waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa halkaas lagu bixiyey shahaadooyin sharaf lagu guddoonsiiyey hawladeenada Mashruuca intooda muujisay hawl karnimo dheeraad ah muddo labo sano oo isku xigta.
Shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiinta Mashruuca QEF ee UK, waxuu ahaa mid aad loogu riyaaqey iyada oo dadka ka soo qaybgalay ay isugu jireen rag iyo dumar ay ka kala yimaaddeen gabalada waddanka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada London.
Shirkan waxaa lagu dhagaystay warbixin maqal iyo muuqaal ah oo ka timid magaalada Qabridahare, taas oo ahayd warbixin toos ah oo ka timid dugsiyada magaalada Qabridahare halkaas oo fariimo badan iyo talaabooyin laga dhageystey macalimiinta iyo hawlwadeenada QEF ee jooga magaalada Qabridahare. Waxaa kale oo shirkaas laga iclaamiyey maamulka cusub oo QEF kuwaas oo ka kooban xubno 5 ah, kalana jooga Dalka Mareykanka, Bariga Dhexe, Ingiriiska iyo magaalada Jijiga.
Shirkan oo socday 3:00 -7:00 Fiidkii, ayaa waxaa la isku weydaarsadey talooyin iyo su,aalo iyo jawaabo badan halkaas oo madaxda mashruuca guud iyo kuwa waddanka UK ay qorteen ayna balan qaadeen in ay la wadaagi doonaan maamulka QEF meelkasta oo ay joogaan.
Mowliid Muxumed Tayse oo ahaa masuuliyiinta QEF kana mid ahaa masuuliyiintii daadihinayey shirka ayaa warbixin aad u wanaagsan ka bixiyey kharashka soo galay laant QEF ee UK inta lacagta bixisey iyo waxa soo gala khasnadda QEF ee UK. Mowliid ayaa waxuu goobta kusoo bandhigey caddeymihii lacagaha soo xaroodey iyo meelaha ay ku baxeenba taasoo ka dhigeysa hay’adda QEF mid uurkujirteeda ay wada ogyihiin dhamaan samafalayaasha QEF.
Deeq Cabdi Raage oo ka mid ah masuulityiinta ugu sareysa QEF ee dhawaan la soo xuley una qaabilsan Xoghaya guud ee Mashruuca oo shirka joogey ayaa isaguna qortay dhamaan waxii talo ahaa ee shirkaas laga soo jeediyey taas oo sida uu balanqaadey uu ugudbin doono masuuliyiinta QEF ayna isku dayi doonaan waxii aysan tabari diidin iney hirgalin doonaan.
Waxii su aalo ah ee la xidhiidhey mashruuca QEF, meesha uu marayo iyo waxa uu maagganyahay waxaa si talantaali ah uga jawaabayey Axmed Cabdi(Wareerey) oo ahaa xoghayihii hore ee QEF, Mowliid Muxumed Tayse oo ah isku xidhaha Mashruuca QEF isla markaana ahaa lacaghayaha QEF ee UK iyo Deeq Cabdi Raage oo ah xoghayaha QEF.
Iyadoo ay dadbadan ka hadleen shirka talooyin badanna laga soo jeediyey iyo su aalo badanba haddana waxaa goobtaas qalimaan dhan 500 oo xabo ugu deeqey mashruuca QEF Suldaan Bashiir Maxamuud Haybe isagoo dadka ku booriyey in qofwalba uu muujiyo dadaal dheeri ah.
Waxaa kale oo kamid ahaa dadkii balanqaadka shirkaas kasameeyey halkaas Eeddo Ruqiyo Xuseen Aabi oo ku deeqdey iney ardeyda dhigata dugsiga Qabridahare ka caawin doonto(Text Books) ay u baahanyihiin. Balanqaadkan ayaa yimid kadib markii cajalkii goobta lagu daawadey uu ku jirey codsi ay macalimiintu soo tabiyeen oo ahaa iney ardeyda iyo macalinmiintu aysan heysan Text Book ku filan.
Dr Maxamed Gamaaddiid oo isna kamid ahaa dadkii ka hadley shirka ayaa balanqaadey inuu ardeyda dugsiga sare ka caawin doono buugaagta dhanka Sayniska iyo xisaabta.
Isku soo duuboo shirka QEF ee London waxuu dhamaan dadkii kasoo qaybgalay faray iney dadaal dheeri ah muujiyaan iyagoo Salaanta Ciidda barkeysan u direy dhamaan umadda Islaamka ah gaar ahaan hawlwadeenada QEF meelkasta oo ay dunida ka joogaan, Ardeyda dugsiyada Qoraxey iyo macalimiinta oo wacdaro marwalba ka muujiya imtixaanaadka ka dhaca dalka Ethiopia.
Abtidoon oo Amarka Eebahay la Afuufay!